Tag: ezigbo oge video | Martech Zone
Kpido: ezigbo oge vidiyo
Marketingdị ahịa Vidio maka 2021
Vidio bụ otu mpaghara m na-agbali ịrị elu n'afọ a. Emechara m Podcast na Owen nke Marketinglọ Akwụkwọ Ahịa Video na ọ kpaliri m itinyekwu mgbalị. M na-ehichapụ ọwa Youtube m n'oge na-adịbeghị anya - maka mụ onwe m na maka Martech Zone (biko denye aha!) M ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka ịdekọba vidiyo dị mma yana ime vidiyo vidiyo oge. M wuru
Vidio> = Foto + Akụkọ
Satọde, Febụwarị 9, 2008 Tọzdee, Ọktoba 31, 2013 Douglas Karr
Ndị mmadụ anaghị agụ. Nke ahụ ọ́ bụghị ihe jọgburu onwe ya ikwu? Dịka onye na - ede blọgụ, ọ na - emetụ mmadụ n’obi mana ekwesịrị m ikweta na ndị mmadụ anaghị agụ. Ozi ịntanetị, mkpokọta weebụ, blọọgụ, na akwụkwọ ahụ aja, pịa a na, arụmọrụ arụmọrụ, nnabata nkwekọrịta, usoro nke ọrụ, ihe e kere eke…. ọ dịghị onye na-agụ ha. Anyị na-arụsi ọrụ ike - naanị anyị chọrọ ịza azịza ma achọghị ịla oge. Anyị n'eziokwu anaghị enwe oge. Izu a bụ izu marathon maka m